Hispanics akashandisa $ 113.9 bhiriyoni pakufamba mudzimba mu2019
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Hispanics akashandisa $ 113.9 bhiriyoni pakufamba mudzimba mu2019
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Caribbean • Kurwisa • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Idzo nhatu dzepamusoro nzvimbo dzekumba dzevaSpanish usiku husiku vafambi ndiCalifornia (21%), Texas (15%) uye Florida (14%). Izvi zvinowirirana kumatunhu matatu nenhamba yepamusoro yevagari vemuSpanish.
Vazhinji vafambi veSpanish (85%) vakashanyira nyika / ndima yemhuri yavo nhaka, iine 15% vachidzoka kanopfuura kamwe pagore uye 22% vachidzoka gore rega.
Makumi makumi manomwe nenomwe muzana vakabvumirana kuti vanowanzo shanyira nzvimbo yekuenda iyo inobatanidza tsika dzeSpanish uye inopemberera bhizinesi reSpanish uye mipiro yetsika.
Idzo nhatu dzepamusoro nzvimbo dzekumba dzevaSpanish usiku husiku vafambi ndiCalifornia (21%), Texas (15%) uye Florida (14%).
Chidzidzo chitsva chinoratidza izvo zvinodikanwa, zvinetsekana uye maitiro evafambi veSpanish muUnited States aburitswa nhasi.
Iyo "Vistas Latinas: Chidzidzo Chinoshamisa paVafambi veUS vekuSpanish Dzinza" mushumo, uyo ane zita rinoreva chiLatin maonero, ndiko kwekutanga kutsvagurudza kwekufamba kwerudzi rwayo kuongorora hunhu, maonero uye mafungiro evafambi vanobva kuUnited States 'boka rinokurumidza kukura.
Vistas Latinas zvakare ndiyo yekutanga ongororo yekushandisa simba revanoshandisa vafambi veSpanish vekuSpain, vachiona vachishandisa madhora zviuru gumi nezana nemazana manomwe nezviuru nezviuru pamifambiro yekuzorora mudzimba mu113.9 uye vakaverengera zvikamu gumi nezvitatu kubva muzana zvemafambiro ekuzorora epamba gore iro.
Vafambi veSpanish & Kumiririra
Huwandu hwevanhu vekuAmerican vekuSpanish hunhu hunoputika hwetsika dzakapfuma, saka zvakakosha kuti uzive kuti nyanzvi dzekufambisa dzakashandisa nzira itsva yekumisikidza ongororo iyi kuratidza kugoverwa kwevanhu veLatinino nyika dzakabatana, uye seizvozvo zvinopa ruzivo rwekuita kunoenderana nekwavanogara vafambi veSpanish uye nekwavanogona kufamba nenzendo dzavo.
Kune avo vakaongororwa Vistas Latinas - vazhinji vakati vakazvarwa mu nyika dzakabatana (83%) uye ruzhinji rwakaratidza kuti vabereki vavo vakazvarwawo muUS.Hafu yevakapindura yakaratidza kuti yavo mhuri yakabva Mekisiko, nepo chikamu chechina chevakabvunzurudzwa vakati vaive ve Caribbean nhaka (Puerto Rican, Dominican kana Cuba).
Zvakakosha zviwanikwa zvinosanganisira:
Ruzhinji - 80% yevafambi veSpanish - vanosarudza kuziva seSpanish, nepo 25% vachida Latino / Latina uye 3% vachida izwi rekuti Latinx (vakapindura vanogona kusarudza izwi rinopfuura rimwe chete).
Makumi makumi mashanu nezviviri kubva muzana zvevakabvunzwa vakati vanogona kushanyira kwavanoenda kana vakaona vamiririri veSpanish munzvimbo yekushambadzira uye / kana zvekushambadzira.
Vafambi veSpanish vanonyanya kushandisa marudzi ese enhau muChirungu.